Esme (TURKEY): Osimiri kachasị mma nke Oké Osimiri Aegean | Akụkọ Njem
Oké Osimiri Aegean jupụtara na oke osimiri mara mma na oke njem nleta na-ekesa na mba dị iche iche.
Otu n'ime osimiri ndị a bụ nke Cesme, obodo ama ama na spa nke dị n'ọnụ ọnụ ala peninshula ihe dịka kilomita 85 site na Izmir, in Turkey. O zuru ezu iji hụ foto nke kpuru okpueze isiokwu a ịchọrọ ịga.
1 Cesme, ndị mara mma
2 Ihe ị ga-ahụ Çesme
3 Ihe ịhụ karịa beyondesme
Cesme, ndị mara mma
Aha na Turkish pụtara "isi iyi" Ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya n’ihi na n’obodo ahụ, e nwere ebe mgbe ochie Ottoman na isi iyi dị ọkụ. Ọ dịlarị ebe ndị ọgaranya nwere ụlọ nke abụọ, mana ruo oge ụfọdụ ugbu a, peninshula abụrụla ebe a na-eme njem ụgbọ mmiri n'akụkụ mba ụwa.
Taa O nwere ụlọ oriri na nkwari, ụlọ mgbazinye, marina, ụlọ nri na ihe niile onye ọbịa ọ bụla chọrọ iji ụbọchị ole na ole pụọ ebe a chọrọ. Ala mmiri gbara gburugburu bụ ebumnuche, gafere obodo mara mma, n'ihi na gburugburu ya enwere obodo nta mara mma, obodo ndị ọzọ pere mpe na mbara ala mara mma ịchọpụta.
Kedu ka ị ga-esi ruo ebe ahụ? Ọ bụrụ n’ị rute Izmir ị nwere ike iburu bọs ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ọrụ kwa ụbọchị ma ha na-aga n'okporo ụzọ jikọtara obodo abụọ ahụ. I nwekwara ike ibata bọs si Istanbul mgbe njem awa asatọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nọ na Gris, n'àgwàetiti Chios, ị nwere ike jide ụgbọ mmiri. Njem a bụ otu awa.
Ọbụna enwere ụzọ ụgbọ mmiri na-emetụ Çesme , n’agbata ọnwa June na Ọktọba, ọ bụ ya mere o ji nwee ọdụ ụgbọ mmiri nke oge a nke enwere ike ịnweta ya site na Çesme Castle mgbe ọ gachara ihe dị ka nkeji iri abụọ na ụsọ mmiri.
Ọ dabara nke ọma n'ime obodo mmadụ nwere ike iji ụkwụ gawa. Ọ bụ kọmpat obodo na mfe iji na. Obere maapụ zuru, chọta nnukwu ụlọ na voila, ọ dị oke mfe ịnyagharịa. Nwere ike nweta eserese na ụlọ ọrụ ndị njem nleta nke dị na elu, na-esote Omenala na n'ihu nnukwu ụlọ ahụ. Site na 8:30 ọ nwere ibo ụzọ.
Ihe ị ga-ahụ Çesme
Ọ dị mma kọfị, ụlọ tii na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ jupụtara ebe niile iri nri, zuru ike ma hụ mmekọrịta mmadụ na obodo nwere nnukwu echiche nke Aegean.
El Castlọ Castle Ọ malitere site na mbido narị afọ nke isii ma wughachi ya na Sultan Beyzit iji nye ezigbo nchekwa megide mwakpo ndị paireti na-ebibi mpaghara ahụ n'oge ahụ.
Ọ bụ nnukwu ebe ewusiri ike nke ụlọ elu isii na moats nke gbara ya gburugburu n’akụkụ ya atọ. Site na agha ahụ echiche obodo na oke osimiri dị ukwuu ma nwee obi ụtọ ọ bụ ụlọ echekwara nke ọma yana ya ụlọ ngosi ihe mgbe ochie abụọ Ha na-atọ ụtọ nke ukwuu.
N'ime otu n'ime ha enwere nchịkọta metụtara obodo ochie nke Erythrai na nke ọzọ nke metụtara agha Turkish-Russia. Ga-ahụ na ihu a ihe akpụrụ akpụ nke Onye Algeria ghazi Hasan Pasha, ọchịagha a ma ama nke akụkọ ihe mere eme a maara dị ka Agha Çesme, ma ọ bụrụ na ị gaa na July ọ bụ ọnọdụ dị mma maka ememme egwu nke obodo na-ahazi.
Cesme bụ akụkọ ihe mere eme mere ịmara ụlọ ahụ gụnyekwara jee ije site na obodo ochie nke obodo nke nwere ọtụtụ ihe owuwu nke narị afọ nke XVIII na XIX, nke ụdị ejiji neoclassical Greek na nke echekwara nke ọma. Na mgbakwunye enwere ụlọ Ottoman, nke pụrụ iche, ma mmadụ nwere ike iji nwayọ na-aga n'okporo ámá ya.
Ọrụ ndị kachasị ọhụrụ na obodo ahụ na-elekwasị anya n'ụsọ oké osimiri n'ihi na afọ isii gara aga marina ohuru, buru ibu, nke nwere mmiri 90 mita na mmiri nke ulo ahia na ebe iri nri na onu n’akuku oke osimiri.
South nke obodo ndị kasị mma osimiri ebe ị nwere ike ịnwụ anwụ, ikuku mmiri ma ọ bụ kitesurf. Enwere kilomita na kilomita nke ájá ọlaedo na peninsula ahụ ma nwee ọtụtụ ihe ịhọrọ site na, ọ bụ ezie na ụfọdụ enweghị ike ịnweta ma otu na-eju anya mgbe ha ga-emeziwanye ohere.
Somefọdụ osimiri na-ewu ewu ma na ị ga-akwụ ụgwọ ọnụ ụzọ iji nọrọ na ha, nke a bụ ikpe Playa del Ebe a Beach Club, na Piyade cove. Bụ ihe ga ịhụ ma hụ.
Otu n'ime osimiri kachasị mma bụ Pirlanta Osimiri, na-agbasa na ọla edo, dị na ndịda ọdịda anyanwụ obodo ahụ, na ọzọ bụ Altinkum Osimiri. Ọ bụrụ na mmiri dị nro amasị gị, ọ bụ Igba Osimiri, ndị kasị nwee ezinụlọ ndị nwere ụmụ. Otu ihe ahụ Buyuk Osimiri, na mmiri dị jụụ, dị oke ọcha ma na-ekpo ọkụ ekele maka nso nke isi iyi ndị na-ekpo ọkụ, ma mara mma na aja ọcha ma ọ bụghị ọla edo dị ka ndị ọzọ.
Nke a na-eme ka osimiri juputara na igwe mmadụ, yabụ ọ bụrụ n'ịga n'oge dị elu, kwadebe maka ìgwè mmadụ. Iji mee windsurf ị ga-aga ebe kachasị anya Alacati, otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa iji mee egwuregwu a, ọbụnadị ebe obibi asọmpi mba ụwa.
Ihe ịhụ karịa beyondesme
Ọ bụghị ihe niile bụ osimiri, anyanwụ na izu ike. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị njem nleta ahụ, ndị na-enweghị ike ịnọ ogologo oge na anyanwụ, ị nwere ike ịhazi njem mmụta gburugburu. E nwere ọtụtụ ebe na-adọrọ mmasị na nkà mmụta ihe ochie na akụkụ a nke Turkey.
N’ebe dị nso ka spa site Ilica ya na mmiri ya dị nro nke aja ọcha na ebe ịsa ahụ ọkụ. Ihe dị ka kilomita iri abụọ dị nso IIdiri, otu saịtị kwupụtara Ihe Nketa Mba maka oge ochie, mgbidi ya na ala ya sitere na oge Hellenic ka na-enwu. Ọ bụrụkwa na ị gbagoo n'obodo akụrụngwa ya mgbe anyanwụ dara, lee ihe ị ga-eme!
dalyan bụ obodo a na-akụ azụ nke dị n'akụkụ oke osimiri miri emi mmiri dị northeast nke Çesme. Dị ka ị nwere ike ịkọ, ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji rie azụ na azụ, yana abalị, ụlọ ndozi na-agbanye ọkụ ma ị nwere ọmarịcha oge.
Nchikota Banye, ebee Pirlanta Plaj osimiri na osimiri Altinkum, nke ị nwere ike maa ụlọikwuu. Obodo nta nke Alaçcati ọ mara mma, ya na ụfọdụ ihe ikuku ya gbanwere n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ma nwekwa ọtụtụ ụsọ osimiri.
Urla Iskelesi ọ bụ ebe ọzọ na peninshula na otu Gümüldür, Sigacik ma ọ bụ Seferihisar, ebe niile n’okpere mmiri na mkpọmkpọ ebe mgbe ochie.
I nwere ike iburu bọs na gaa leta Izmirka ihe atụ, ochie Smyrna, na-eje ije site na ya ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke nkà mmụta ihe ochie na ethnography, site na mkpọmkpọ ebe nke Nzukọ Ndị Rom, nnukwu ụlọ na ihe niile a zọpụtara site na agha Russo-Turkish na 20s.
Njem ọzọ ị nwere ike ime bụ ịga maara Efesọs, doro anya na a pealu nke Mediterranean na-eme na Gris na ndị Rom gara aga nke ebe a. E nwekwara mkpọmkpọ ebe nke oge ochie Pagamọm, n'ebe ugwu nke Bergama, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu, gaa n'ihu n'ime ime ma rute Hierapolis na Pamukkale nwere ọmarịcha mkpọmkpọ ebe ya na nsụda mmiri nke ice, nsụda mmiri nke e ji nkume nzu nzu mee n'ezie nke yiri ka ọ na-esi n'akụkụ ugwu agafe. Ihe ngosi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Turkey » Esme (TURKEY): Osimiri kachasị mma n’oké osimiri Aegean